Ingobo yomlando yesigaba: Fibromyalgia
I-Fibromyalgia yisifo esingelapheki sobuhlungu esihlinzeka ngesisekelo sezimpawu ezahlukahlukene nezimpawu zomtholampilo. Lapha ungafunda kabanzi ngezindatshana ezahlukahlukene esizibhalile mayelana nesifo esingelapheki sobuhlungu besifo i-fibromyalgia - futhi hhayi okungenani ukuthi hlobo luni lwezindlela zokwelapha nezindlela zokuzitholela izinto ezitholakalayo zalesi sifo.
I-Fibromyalgia yaziwa nangokuthi i-rheumatism yezicubu ezithambile. Lesi simo singafaka phakathi izimpawu ezinjengobuhlungu obungapheliyo emisipha kanye nokuhlangana, ukukhathala nokudangala.
I-Fibromyalgia kanye Ne-Central Sensitization
04 / 06 / 2022 /i fibromyalgia/av olimalayo
I-Fibromyalgia kanye Ne-Central Sensitization: I-Mechanism Behind the Pain
Ukuzwela okuphakathi kubhekwa njengenye yezindlela eziyinhloko ezibangela ubuhlungu be-fibromyalgia.
Kodwa yini i-central sensitization? Hhayi-ke, lapha kuyasiza ukubhidliza amagama kancane. I-Central ibhekisela ohlelweni lwezinzwa oluphakathi - okungukuthi ubuchopho kanye nemizwa esemgogodleni. Yile ngxenye yesimiso sezinzwa esihumusha futhi siphendule izisusa ezivela kwezinye izingxenye zomzimba. Ukuzwela kuwushintsho oluhamba kancane endleleni umzimba osabela ngayo kuzinto ezishukumisayo noma izinto ezithile. Ngezinye izikhathi ibizwa nangokuthi i-pain sensitivity syndrome.
- I-Fibromyalgia Ixhunywe Kusistimu Yezinzwa Emaphakathi Esebenzayo
I-Fibromyalgia yi-syndrome yobuhlungu obungapheli engachazwa njengokubili kwe-neurological and rheumatological. Phakathi kwezinye izinto, ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuxilongwa kubangela ubuhlungu obukhulu ngokuhambisana nenani lezinye izimpawu (1). Ocwaningweni esixhumanisa nalo lapha, kuchazwa njenge-central sensitivity syndrome. Ngamanye amazwi, bakholelwa ukuthi i-fibromyalgia iyi-syndrome yobuhlungu lapho ukusebenza ngokweqile ohlelweni lwezinzwa oluphakathi kuholela emaphutheni ezindleleni zokuhumusha ubuhlungu (okwandiswa ngakho).
Iyini i-Central Nervous System?
Isimiso sezinzwa esimaphakathi siyingxenye yesimiso sezinzwa esibhekisela ebuchosheni nasentanjeni yomgogodla. Ngokuphambene nesimiso sezinzwa se-peripheral esihilela izinzwa ezingaphandle kwalezi zindawo - njengamagatsha adlulela ezingalweni nasemilenzeni. Isimiso sezinzwa esimaphakathi siwuhlelo lokulawula lomzimba lokwamukela nokuthumela ulwazi. Ubuchopho bulawula imisebenzi eminingi yomzimba - njengokunyakaza, imicabango, ukusebenza kwenkulumo, ukwazi nokucabanga. Ngaphezu kwalokhu, iyakwazi ukulawula ukubona, ukuzwa, ukuzwela, ukunambitha kanye nephunga. Iqiniso liwukuthi umuntu angabheka umgogodla njengohlobo 'lwesandiso' sobuchopho. Iqiniso lokuthi i-fibromyalgia ixhunyaniswe nokuzwela ngokweqile kwalokhu ngakho-ke kungabangela izinhlobonhlobo zezimpawu nobuhlungu - okuhlanganisa imiphumela emathunjini kanye nokugaya.
Sibheka kabanzi I-Central Sensitization
Ukuzwela kuhilela ushintsho kancane kancane endleleni umzimba wakho osabela ngayo esivuselelweni. Isibonelo esihle nesilula singaba yi-allergies. Ngokungezwani komzimba nezinto ezithile, wukusabela okweqile kwamasosha omzimba okuyimbangela yezimpawu ozizwayo. Ku-fibromyalgia nakwamanye ama-syndromes obuhlungu, kukholakala ukuthi isimiso sezinzwa esiyinhloko sesisebenze ngokweqile, futhi lokhu kuyisisekelo seziqephu ze-hypersensitivity emisipha kanye ne-allodynia.
Ukuzwela okuphakathi ku-fibromyalgia kusho ukuthi umzimba nobuchopho bubika ngokweqile izimpawu zobuhlungu. Lokhu kungasiza futhi ukuchaza ukuthi kungani futhi kanjani i-syndrome yobuhlungu ibangela ubuhlungu bemisipha obusabalele.
- Eminyangweni yethu ehlukahlukene eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kanye noViken (Eidsvoll Sound og I-Råholt) odokotela bethu banekhono elikhethekile elikhethekile ekuhloleni, ekwelapheni nasekuqeqesheni ukuhlunyeleliswa kwezinhlungu ezingapheli. Chofoza izixhumanisi noma wakhe ukufunda okwengeziwe ngeminyango yethu.
I-Allodynia ne-Hyperalgesia: Lapho Ukuthinta Kubuhlungu
Ama-nerve receptors esikhumbeni athumela amasignali ohlelweni lwezinzwa olumaphakathi lapho ethintwa. Lapho uthintwa kancane, ubuchopho kufanele buhumushe lokhu njengezinto ezivusa amadlingozi ezingenabuhlungu, kodwa lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi. Kulokho okubizwa ngokuthi ama-flare-ups, okungukuthi izikhathi ezimbi zeziguli ze-fibromyalgia, ngisho nokuthinta ukukhanya okunjalo kungaba buhlungu. Lokhu kubizwa nge-allodynia futhi kufanele - ukuqagele - ukuzwela okumaphakathi.
Ngakho-ke i-allodynia isho ukuthi izimpawu zemizwa zichazwa kabi futhi zibikwa ngokweqile ohlelweni lwezinzwa oluphakathi. Umphumela ungaba ukuthi ukuthinta okulula kubikwa njengokubuhlungu - noma kungenjalo. Iziqephu ezinjalo zenzeka kaningi phakathi nezikhathi ezimbi ezinokucindezeleka okuningi kanye nolunye uhlobo (ama-flare-ups). I-Allodynia inguqulo enamandla kakhulu ye i-hyperalgesia - yikuphi kwalokhu okusho ukuthi izimpawu zobuhlungu zikhuliswa ngamazinga ahlukahlukene.
- I-Fibromyalgia ixhunywe ku-Episodic Flare-ups kanye Nokukhululwa
Lapha kubaluleke kakhulu ukuveza ukuthi iziqephu ezinjalo zingahluka kumuntu nomuntu. I-Fibromyalgia ivamise ukudlula ezikhathini ezinezimpawu ezishubile kanye nobuhlungu - obubizwa ngama-flare-ups. Kodwa, ngenhlanhla, kunezikhathi zobuhlungu obuncane kanye nezimpawu (izikhathi zokuxolelwa). Izinguquko ezinjalo ze-episodic futhi zichaza ukuthi kungani ukuthinta ukukhanya kungaba buhlungu ngezikhathi ezithile.
Ngenhlanhla, lukhona usizo olutholakalayo lokulawula ubuhlungu ngendlela engcono. Ku-syndrome yobuhlungu obungapheli, kukhona ubuhlungu beqiniso - ngendlela yobuhlungu bemisipha kanye nokuqina kwamalunga. Funa usizo lwakho kokubili ukuhlolwa, ukwelashwa kanye nokuvuselelwa kwemisipha ebuhlungu kanye namalunga aqinile. Udokotela uzokwazi futhi ukukusiza ukuthi ubone ukuthi yiziphi izivivinyo zokuvuselela kanye nezinyathelo zokuzithiba ezilungele wena. Kokubili ukwelashwa kwemisipha kanye nokuhlanganisa amalunga okuguquguqukayo kungasiza ekunciphiseni ukungezwani nobuhlungu.
Iyini Imbangela Yokuzwela Okumaphakathi Ezigulini Ze-Fibro?
Akekho obuza ukuthi i-fibromyalgia iyi-syndrome yobuhlungu eyinkimbinkimbi futhi ebanzi. Ukuzwela okuphakathi kubangelwa izinguquko zomzimba ohlelweni lwezinzwa. Isibonelo, lokho kuthintwa nobuhlungu kuhunyushwa ngendlela ehlukile / amaphutha ebuchosheni. Nokho, abacwaningi abaqiniseki ngokuphelele ukuthi lezi zinguquko zenzeka kanjani. Nokho, kuye kwabonakala ukuthi ezimweni eziningi izinguquko zibonakala zixhunyaniswa nesenzakalo esithile, ukuhlukumezeka, inkambo yesifo, ukutheleleka noma ukucindezeleka kwengqondo.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi kufika ku-5-10% yalabo abathintwe yi-stroke bangase babe nokuzwela okuphakathi ezingxenyeni zomzimba ngemva kokuhlukumezeka (2). Isigameko esiphakeme kakhulu siphinde sabonakala phakathi kwabantu ngemva kokulimala komgogodla kanye nalabo abane-multiple sclerosis (MS). Kodwa futhi kwaziwa ukuthi ukuzwela okuphakathi kwenzeka kubantu abangenakho ukulimala noma ukuhlukumezeka okunjalo - futhi lapha kucatshangelwa, phakathi kwezinye izinto, ukuthi kungase kube khona izici ezithile zofuzo kanye ne-epigenetic edlalwayo. Ucwaningo luphinde lwabonisa ukuthi izinga lokulala eliphansi kanye nokuntuleka kokulala - izici ezimbili ezivame ukuthinta iziguli ze-fibromyalgia - zixhunyaniswa nokuzwela.
Imibandela Nezifo Ezixhumene Nokuzwela Okumaphakathi
Njengoba kunocwaningo olwengeziwe kulo mkhakha, ukuxhumana okungenzeka kubonwe ngokuxilonga okuningana. Phakathi kwezinye izinto, kukholakala ukuthi ukuzwela kuchaza ubuhlungu obuhlobene nenani lokuxilongwa okungapheli kwe-musculoskeletal. Phakathi kwezinye izinto, lokhu kuhlanganisa izindlela ezibonwa, isibonelo:
I-Irritable Bowel Syndrome (IBS)
I-Chronic Fatigue Syndrome (CFS)
I-Migraine kanye nekhanda elibuhlungu elingapheli
Ukuqina komhlathi okungapheli
Ubuhlungu obungapheli bezentamo
Ubuhlungu besibazi (ngokwesibonelo, ngemva kokuhlinzwa)
Njengoba sibona ohlwini olungenhla, olunye ucwaningo ngalesi sihloko lubaluleke ngendlela emangalisayo. Mhlawumbe umuntu angasebenzisa kancane kancane ukuqonda okwandisiwe ukuze athuthukise izindlela zokuhlola zesimanje, ezintsha nezindlela zokwelapha? Sithemba kanjalo okungenani, kodwa okwamanje ukugxila kakhulu ezinyathelweni zokuvimbela nezokuqeda izimpawu ezisebenzayo.
Ukwelashwa kanye Nezinyathelo Zokuzenzela Zokuzwela Izinhlungu
(Isithombe: Ukwelashwa kokungezwani kwemisipha nokuqina kwamalunga phakathi kwamahlombe ehlombe)
Izikhathi ezimbi nezimpawu eziningi phakathi kweziguli ze-fibromyalgia zibizwa ngokuthi ama-flare-ups. Lezi ngokuvamile ziyimbangela yalokho esikubiza ngokuthi trigger - okungukuthi, izimbangela ezibangela. Esihlokweni esixhunywe ku wakhe sikhuluma ngezimbangela eziyisikhombisa ezijwayelekile (isixhumanisi sivula efasiteleni elisha lokufunda ukuze uqedele ukufunda isihloko lapha). Siyazi ukuthi ukusabela kwengcindezi ikakhulukazi (ngokomzimba, ngokwengqondo namakhemikhali) okungaholela ezikhathini ezimbi kangako. Kuyaziwa futhi ukuthi izinyathelo zokunciphisa ukucindezeleka zingaba nomphumela wokuvimbela, kodwa futhi opholile.
- Ukwelashwa ngokomzimba kunomphumela obhaliwe
Izindlela zokwelapha ezingasiza zihlanganisa izindlela zokwelapha ngokomzimba ezifana nokusebenza kwemisipha, ukuhlanganisa amalunga ngokwezifiso, ukwelapha nge-laser, ukudonsa kanye nokutshopa kwe-intramuscular. Inhloso yokwelashwa ukuqeda izibonakaliso zobuhlungu, ukunciphisa ukungezwani kwemisipha, ukugqugquzela ukujikeleza okuthuthukisiwe nokuthuthukisa ukuhamba. I-laser therapy ekhethekile - eyenziwa kuyo yonke iminyango Imitholampilo yezinhlungu - ibonise imiphumela emihle kakhulu ezigulini ze-fibromyalgia. Ukwelashwa ngokuvamile kwenziwa yi-chiropractor yesimanje kanye / noma i-physiotherapist.
Ucwaningo oluhlelekile oluhlanganisa izifundo ezingu-9 kanye neziguli ze-fibromyalgia ezingu-325 zaphetha ngokuthi ukwelashwa nge-laser kwakuyindlela yokwelapha ephephile nephumelelayo ye-fibromyalgia.3). Phakathi kwezinye izinto, kwabonakala, uma kuqhathaniswa nalabo abenza izivivinyo kuphela, ukuthi lapho kuhlanganiswa nokwelashwa kwe-laser, ukunciphisa ubuhlungu obukhulu, ukunciphisa amaphuzu okubangela nokukhathala okuncane kubonakala. Esihlahleni socwaningo, ucwaningo olunjalo oluhlelekile luwuhlobo locwaningo oluqine kakhulu - olugcizelela ukubaluleka kwale miphumela. Ngokusho kweMithetho Yokuvikela I-radiation, udokotela kuphela, i-physiotherapist kanye ne-chiropractor abavunyelwe ukusebenzisa lolu hlobo lwe-laser (i-class 3B).
- Ezinye Izinyathelo Ezinhle Zokuzibamba
Ngaphezu kokwelashwa ngokomzimba, kubalulekile ukuthola izindlela ezinhle zokuzithiba ezikusebenzela ukuphumula. Lapha kukhona okuthandwayo komuntu ngamunye kanye nemiphumela, ngakho-ke kufanele uzame futhi uzitholele izinyathelo ezifanele. Nalu uhlu lwezinyathelo esincoma ukuthi uzame:
1. Isikhathi samahhala sansuku zonke sivuliwe i-acupressure mat (iphoyinti lokubhucunga umcamelo ohambisana nentamo) noma ukusetshenziswa inhlamvu iphuzu amabhola (funda kabanzi ngabo ngesixhumanisi lapha - ivula efasiteleni elisha)
(Isithombe: I-Acupressure mat enomcamelo wentamo)
Mayelana naleli thiphu, sithole imibuzo embalwa evela kwabathintekayo mayelana nokuthi kufanele bahlale isikhathi esingakanani kumata we-acupressure. Lokhu kuvumelana, kodwa nge-mat esiyixhume ngenhla, ngokuvamile sincoma ukusuka phakathi kwemizuzu eyi-15 kuye kwengama-40. Zizwe ukhululekile ukukuhlanganisa nokuqeqeshwa ekuphefumuleni okujulile kanye nokuqwashisa indlela yokuphefumula efanele.
2. Ukuqeqeshwa echibini lamanzi ashisayo
Xhumana nethimba lakho lendawo ye-rheumatology ukuze ubuze ukuthi akhona yini amakilasi eqembu ajwayelekile eduze nawe.
3. I-Yoga nokuzivocavoca umzimba (bona ividiyo ngezansi)
Kuvidiyo engezansi imibukiso chiropractor Alexander Andorff u-ved Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy uthuthukise izivivinyo zokunyakaza ezenziwe ngokwezifiso zama-rheumatologists. Khumbula ukulungisa izivivinyo zibe nomlando wakho wezokwelapha kanye nefomu lansuku zonke. Isiteshi sethu se-YouTube futhi sinezinhlelo zokuqeqesha ezinhle kakhulu kunalezi uma ukuthola lokhu kunzima kakhulu.
4. Thatha uhambo nsuku zonke
Chitha isikhathi kwezokuzilibazisa ozipholele ngakho
Bala amathonya amabi - bese uzama ukuwasusa
Ukuzivocavoca Okungasiza Ngokungazweli Nokuphumula
Kuvidiyo engezansi ungabona uhlelo lokunyakaza olunjongo yalo eyinhloko iwukugqugquzela ukunyakaza kwamalunga nokuhlinzeka ngokuphumula kwemisipha. Uhlelo lulungiswa ngu chiropractor Alexander Andorff (zizwe ukhululekile ukulandela ikhasi lakhe likaFacebook) nge Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy e-Oslo. Kungenziwa nsuku zonke.
I-VIDEO: I-5 Exercise Exercise for Rheumatists
Joyina umndeni wethu! Bhalisa mahhala esiteshini sethu se-YouTube lapha (isixhumanisi sivuleka efasiteleni elisha)
«Joyina iqembu lethu labangane ngokusilandela ezinkundleni zokuxhumana futhi ubhalisele isiteshi sethu se-YouTube! Bese uthola ukufinyelela kumavidiyo amasonto onke, okuthunyelwe kwansuku zonke ku-Facebook, izinhlelo zokuzilolonga ezichwepheshile kanye nolwazi lwamahhala oluvela kochwepheshe bezempilo abagunyaziwe. Sisonke sinamandla!"
Joyina Iqembu lethu Lokusekela I-Rheumatologist & Fibromyalgia - futhi Usilandele Ngenkuthalo ku-Social Media
Zizwe ukhululekile ukujoyina i-Facebook group «I-Rheumatism ne-Chronic Pain - INorway: Ucwaningo nezindaba» (chofoza lapha) ngezivuseleli zakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba mayelana nokuphazamiseka kwezifo ezithile futhi ezingelapheki. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngawo wonke amahora osuku - ngokubonisana ngolwazi lwawo kanye nezeluleko. Uma kungenjalo, sibonga ngempela uma ufuna ukusilandela ikhasi Facebook og Isiteshi sethu se-YouTube - futhi khumbula ukuthi sikwazisa ngempela ukuphawula, ukwabelana nokuthandwayo.
Zizwe ukhululekile ukwabelana nokweseka Labo Abanesifo Samathambo Kanye Nobuhlungu Obungamahlalakhona
Ngokufisela impilo enhle kuwe nakwakho,
Imitholampilo yezinhlungu - I-Interdisciplinary Health
Chofoza lapha ukuze ubone isifinyezo semitholampilo yethu. Khumbula ukuthi imitholampilo yethu yesimanje yezinhlaka ezahlukene iyakujabulela ukukusiza ngezifo zakho emisipha, imisipha, imizwa kanye namalunga.
1. I-Boomershine et al, 2015. I-Fibromyalgia: i-prototypical central sensitivity syndrome. I-Curr Rheumatol Rev. 2015; 11 (2): 131-45.
2. Finnerup et al, 2009. Ubuhlungu be-post-stroke obuphakathi: izici zomtholampilo, i-pathophysiology, nokuphathwa. I-Lancet Neurol. 2009 Sep; 8 (9): 857-68.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-sentra-sensitivisering.jpg?media=1648573622 368 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2022-06-04 18:41:022022-06-04 18:41:02I-Fibromyalgia kanye Ne-Central Sensitization
Izeluleko ezi-7 Zokukhuthazela ngeFibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i fibromyalgia, Ubuhlungu obungapheli/av olimalayo
Izeluleko ezi-7 Zokukhuthazelela Nge-Fibromyalgia
Qeda fibromyalgia futhi usuzohamba odongeni? Ake sikusize.
I-Fibromyalgia ingadala izinselelo ezinkulu empilweni yansuku zonke. Kungase kube nzima ngempela ukuba nesifo esibuhlungu esingapheli. Nawa amathiphu angu-7 nezinyathelo ezingakusiza ukuthi ukhulule izimpawu ezivamile ze-fibromyalgia futhi wenze usuku lwakho lube lula.
- Ndawonye Ukwandisa Ukuqonda Kwezifo Ezingalapheki Pain Syndrome
Abaningi balabo abanobuhlungu obungapheli banomuzwa wokuthi abazwakali noma abathathwa ngokungathi sína. Lokho akukwazi ukuvunyelwa ukuba kube njalo. Sima nalabo abathintwe izinhlungu ezingapheli futhi sikucela ngomusa ukuthi wabelane ngalesi sihloko ezinkundleni zokuxhumana ukuze uthole ukuqonda okwengeziwe mayelana nalesi sifo. Ngikubonga kusengaphambili. Zizwe ukhululekile ukusilandela nge Facebook og YouTube.
- Eminyangweni yethu ehlukahlukene eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kanye noViken (Eidsvoll Sound og I-Råholt) odokotela bethu banekhono elikhethekile elikhethekile ekuhloleni, ekwelapheni nasekuqeqesheni ukuhlunyeleliswa kobuhlungu obungapheli. Nathi, uzohlale uthathwa ngokungathí sina. Chofoza izixhumanisi noma wakhe ukufunda okwengeziwe ngeminyango yethu.
Skrolela phansi ukuze ubone amavidiyo amabili amahle okujima anokuzivocavoca nezindlela zokuphumula ezingaba wusizo kuwe nge-fibromyalgia.
Uthinteka Kanjani? Joyina iqembu le-Facebook «I-Rheumatism - iNorway: Ucwaningo Nezindaba»Okokuvuselelwa kwakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba mayelana nalokhu kanye nezinye izifo ezixakile. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngazo zonke izikhathi zosuku - ngokushintshana nakho kwabo siqu nezeluleko.
1. Cindezela phansi
Ingcindezi ingadala futhi ibangele "ama-flare ups" ku-fibromyalgia.
Ukunciphisa ukucindezeleka ekuphileni kwansuku zonke kungaholela ekubeni ngcono izinga lempilo kanye nezimpawu ezincane. Ezinye izindlela ezinconyiwe zokubhekana nokucindezeleka i-yoga, ingqondo, i-acupressure, ukuzivocavoca nokuzindla. Amasu wokuphefumula nokwazi kahle amasu anjalo nawo angasiza.
- Thatha isikhathi sokuphumula
Funda ukuzethemba osukwini lwanamuhla olubeka izindinganiso eziphakeme. Sincoma kakhulu iseshini yokuphumula yansuku zonke i-acupressure mat (chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi - isixhumanisi sivuleka efasiteleni elisha). Lokhu okuhlukile kuphinde kube nomcamelo wentamo ofakiwe owenza kube lula ukusebenza emisipha eqinile engaphezulu nasentanyeni.
Funda futhi: 7 Izimbangela Ezaziwayo Zokuthi Aggravate Fibromyalgia
Chofoza kusixhumanisi esingenhla ukuze ufunde i-athikili.
2. Ukuqeqeshwa Okujwayelekile
Ukuzivocavoca nge-fibromyalgia kungaba nzima kakhulu.
Kodwa-ke, ezinye izinhlobo zokuzivocavoca zingasebenza kahle - njengokuvivinya umzimba njalo, okuphansi, njengokuhamba noma ukuzivocavoca emanzini ashisayo kungenye yezindlela zokwelapha ezingcono kakhulu ze-fibromyalgia.
Kungakusiza ukuthi wehlise izinhlungu nokuqina, futhi ukukunikeze umuzwa owengeziwe wokulawula ukuhlolwa kobuhlungu okungapheli. Khuluma nodokotela wakho, i-physiotherapist yakho, i-chiropractor yakho noma udokotela ukuze uthole ukuthi yiluphi uhlobo lohlelo lokuzivocavoca olungakulungele - siyajabula futhi ukukusiza ngesiteshi sethu se-YouTube noma omunye wemitholampilo yethu yezinhlanga ezahlukene uma ufisa.
I-Fibromyalgia ibangela ubuhlungu obungapheli kanye nokuqina kwezicubu zomzimba kanye nokuhlangana. Nalu uhlelo lokuzivocavoca okuhlanu olungakusiza ugcine umhlane wakho, okhalweni kanye ne-pelvis. Chofoza ngezansi ukuze ubone ukuzivocavoca.
I-VIDEO - Ukuzivocavoca okungu-7 kwamaRheumatists:
Ingaqali yini ividiyo uma uyicindezela? Zama ukubuyekeza isiphequluli sakho noma yibuke ngqo esiteshini sethu se-YouTube. Futhi khumbula ukubhalisa - mahhala ngokuphelele - esiteshini uma ufuna ezinye izinhlelo ezinhle zokuqeqesha nokuzivocavoca umzimba.
3. Ukugeza Okushisayo
Uyakujabulela ukuphumula kubhavu oshisayo? Kungakusiza.
Ukulala ebhavini elifudumele kungadala ukuba izicubu ziphumule nezinhlungu zokuphumula uphahla kancane. Lolu hlobo lokushisa lungakhuphula izinga le-endorphin emzimbeni - elivimba izimpawu zobuhlungu futhi lingaholela ekuthuthukisweni kwekhwalithi yokulala. Sincoma ukusetshenziswa kwe iphakethe lokushisa elingasetshenziswa kabusha (bona isibonelo lapha - isixhumanisi sivuleka efasiteleni elisha). Iphakethe lisebenza ngokulishisa bese lilibeka emisipha eqinile nebuhlungu.
Uthanda inkomishi yekhofi eqinile? Kungaba umkhuba omubi kithi nge-fibro, ngeshwa.
I-Caffeine iyisikhuthazi esimaphakathi- okusho ukuthi kuvusa inhliziyo nohlelo lwemizwa oluphakathi ukuthi lube 'esexwayisweni esiphezulu'. Lapho ucwaningo selukhombisile ukuthi nge-fibromyalgia sinemicu yezinzwa esebenza ngokweqile, siyaqaphela ukuthi lokhu akuyona neze into enhle. Kodwa ngeke sikuphuce ikhofi lakho ngokuphelele - lokho bekungaba kubi ngendlela emangalisayo. Kunalokho zama ukwehla kancane.
Lokhu kungaholela kwikhwalithi empofu yokulala nokukhathazeka. Ngakho-ke zama ukunciphisa ukulinganiselwa kokudla kwe-caffeine, ngoba labo abane-fibromyalgia sebevele benesistimu yezinzwa ekhuthele kakhulu. Okubaluleke kakhulu ukuthi ugwema ikhofi neziphuzo zamandla kusukela ntambama kuye phambili. Mhlawumbe ungazama ukushintshela ekukhetheni okubunjiwe?
Funda futhi: Lezi yizinhlobo ezi-7 ezihlukile ze-Fibromyalgia Pain
Bekela eceleni isikhathi sakho - nsuku zonke
Isikhathi sangempela singabaluleka kakhulu kithi nge-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia ingenza impilo ibe nzima ngazo zonke izinselelo ekuphonsela yona. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uzibekela isikhathi sosuku ngalunye njengengxenye yokuzinakekela kwakho. Jabulela umdlalo wakho wokuzilibazisa, lalela umculo, phumula - yenza lokho okukwenza uzizwe ungcono.
Isikhathi esinjalo sokuzenzela singenza impilo ibe ngaphezulu, kwehlise amazinga okuxineka emzimbeni wakho futhi ikunikeze amandla amaningi empilweni yakho yansuku zonke. Mhlawumbe ihora lenyanga yokwelashwa ngokomzimba (isibonelo, ukwelashwa ngokomzimba, chiropractic yanamuhla noma ukutshopa?) futhi kungaba ngumqondo omuhle?
6. Khuluma ngobuhlungu
Musa ukubamba ubuhlungu bakho. Akukuhle kuwe.
Abantu abaningi kakhulu abane-fibromyalgia bayahamba bazigcinele ubuhlungu - kuze kungabe kusahamba futhi nemizwa ithathe indawo. I-Fibromyalgia izibangela ingcindezi ngokwakho, kepha nalabo abakuzungezile - ngakho-ke ukuxhumana kuyisihluthulelo.
Uma ungazizwa kahle - sho kanjalo. Yisho ukuthi kufanele ube nesikhathi samahhala, ukugeza okushisayo noma okufanayo ngoba manje kuyindaba yokuthi i-fibromyalgia isezingeni eliphezulu. Umndeni nabangane badinga ukwazi ukugula kwakho nokuthi yini edala ukuthi ibe yimbi. Ngolwazi olunjalo, bangaba yingxenye yesisombululo lapho udinga usizo.
7. Funda ukuthi Cha
I-Fibromyalgia ivame ukubizwa ngokuthi 'isifo esingabonakali'.
Kubizwa kanjalo ngoba kungaba nzima ukuthi abaseduze kwakho bakubone ukuthi usezinhlungwini noma uhlupheka uthule. Lapha kubaluleke kakhulu ukuthi ufunde ukuzibekela imingcele nokuthi yini ongayibekezelela. Kufanele ufunde ukuthi cha lapho abantu befuna ingxenye enkulu yakho emsebenzini nasempilweni yansuku zonke - noma ngabe kungqubuzana nobuntu bakho obusizayo kanye nezindinganiso zakho eziyinhloko.
Sigqugquzela wonke umuntu onale nkinga ukuthi ajoyine iqembu le-Facebook «I-Rheumatism - iNorway: Ucwaningo Nezindaba»- lapha ungakhuluma ngesimo sakho futhi uthole izeluleko ezinhle kubantu abanomqondo ofanayo.
Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela ku-Social Media
Futhi, ngakho sifuna å buza kahle ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi yakho (zizwe ukhululekile ukuxhumana ngqo nendatshana). Ukuqonda nokugxila okwandayo kuyisinyathelo sokuqala sokuya empilweni engcono yansuku zonke kulabo abanezinhlungu ezingapheli.
Iziphakamiso ezingasiza ukulwa ne-fibromyalgia nokuxilongwa kwezifo ezingapheli:
Ukukhetha A: Yabelana ngqo kuFB - Kopisha ikheli lewebhusayithi bese ulinamathisela ekhasini lakho le-facebook noma eqenjini elifanele le-facebook oyilungu lalo. Noma cindezela inkinobho "YABELA" ngezansi ukuze wabelane ngokuthunyelwe ngokuqhubekayo kufacebook wakho.
Thinta lokhu ukuze wabelane ngokuqhubekayo. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu osiza ukukhuthaza ukuqonda okwandayo kwezifo ezingamahlalakhona nobuhlungu be-fibromyalgia!
Imibuzo? Noma ufuna ukubhukha i-aphoyintimenti komunye wemitholampilo yethu ehlobene?
Sinikeza ukuhlolwa kwesimanje, ukwelashwa nokuqeqeshwa kobuhlungu obungapheli.
Zizwe ukhululekile ukusithinta ngeyodwa yazo imitholampilo yethu ekhethekile (uhlolojikelele lomtholampilo luvuleka efasiteleni elisha) noma kuqhubeke ikhasi lethu Facebook (Vondtklinikkene - Impilo Nokuzivocavoca) uma unemibuzo. Ukuze uthole ama-aphoyintimenti, sinokubhukha ku-inthanethi kwamahora angu-XNUMX emitholampilo ehlukahlukene ukuze uthole isikhathi sokubonisana esikufanela kangcono. Ungasishayela futhi phakathi namahora okuvulwa komtholampilo. Sineminyango yezinhlaka ezihlukene e-Oslo (okufakiwe Lambertseter) kanye noViken (I-Råholt og I-Eidsvoll). Abelaphi bethu abanekhono babheke ngabomvu ukuzwa kuwe.
IPHEPHA LOKUQALA: 5 Ukuzivocavoca kokunyakaza kulabo abane-Fibromyalgia
Chofoza esithombeni noma kusixhumanisi ngaphezulu.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:26Izeluleko ezi-7 Zokukhuthazela ngeFibromyalgia